Cayaaraha kubadda cagta gabdhaha. - BBC News Somali
Cayaaraha kubadda cagta gabdhaha.
Codkaaga halkan ku dhiibo
Ama Telefoon ku codee: +44 7786 20 20 04 qor 1 Si aad Veronica ugu codayso:
Waa 27-jir qadka dhexe ee weerarka ka cayaarta. Waxay kabtan u noqotay kooxda gabdhaha Spain ee u gudbay koobka adduunka markii ugu horaysay.
Dadaal badan oo leh tayo sare oo gool dhalineed – waxay dhalisay 29 gool oo ay ku ansixisay 42 kulan – waxay ahayd wadnaha kooxda ay u cayaarto.
Waxaa kaloo loo aqoonsan yahay in ay tahay haweenaydii, sanadkii 2013, bilowday bayaan ay ku doonaysay in gabadhaha kubadda cagta ay ka mid noqdaan tartamada Fifa hoos tagaan cayaarahoodi, iyadoo uruurisay 20 kun oo saxiix.
Waxay tiri: “Dhab ahaantii aad baan ugu faraxsanahay [in la ii magacaabay Biladda Cayaaryahanadda ugu Wanaagsan Kubadda Cagta ee BBC]. Waxa ay muujinaysaa inaan howl wanaagsan qabtay sanadkii la soo dhaafay. Sidoo kalana waa dhiirigelin kale oo dheeraad oo ku saabsaan mustaqbalka.”
Nadine Kessler (Germany iyo kooxda Wolfsburg)
Ama Telefoon ku codee: +44 7786 20 20 04 qor 2 Si aad Nadine Kessler ugu codayso:
Waa kabtanka mid ka mid ah kooxaha haweenka ee ugu taariikhda weyn Yurub, isla markaana ay ka tirsan yihiin cayaaryahano muhiim u ah xulka qaranka haweenka Jarmalka. Ma jirto bilad kubadda cagta haweenka ah oo aanay ku guuleysan Kessler, weliba marar badan.
Kessler oo 27 jir khadka dhexe ah, ayaa kabtan u ahayd kooxda Wolfsburg ee ka dheesha horyaalka Jarmalka ee Bundesliga, kooxda oo xilli cayaareedkii lasoo dhaafay markii labaad ee isku xigtay qaaday koobabka tartanka horyaalada Yurub ee haweenka iyo kan Frauen Bundesliga.
Guulahaasi ayaa u horseeday in ay qaadato bilada FIFA ee cayaaryahannada ugu wanaagsan sanadka 2015-ka, iyada oo ka guuleysatay gabadha ay kawada tirsan yihiin xulka qaranka Jarmalka ee Nadine Angerer. Balse waxa ay su’aal ka taagan tahay sida ay uga soo dhalaali karto tartanka Canada 2015, maadaama ay dhawaan dhaawacyo la kullantay.
Waxay tiri: “Waxaan doonayay in aan cayaaro kubadayda cagta, aan noqdo qof guulaystay oo aan dadaalkayga ugu wanaagsan bixiyo. Hase yeeshee sida aan leeyahay, waligay kuma riyoon wax la mid ah arrintan, in uu dadaalkaygu i gaarsiinayo oo liiskan la igu daro." [Ku guulaysiga tartanka abaalmarinta cayaaryahanadda kubadda cagta Fifa ee 2015]
Kim Little (Scotland iyo kooxda Seattle Reign)
Ama Telefoon ku codee: +44 7786 20 20 04 qor 3 for Asisat Oshoala:
Marta (Brazil iyo kooxda FC Rosengard)
Ama Telefoon ku codee: +44 7786 20 20 04 qor 4 si aad Marta ugu codayso:
Marta ayaa la oran karaa waa magaca ugu caansan kubadda cagta ee haweenka.
Asisat Oshoala (Nigeria iyo Liverpool)
Ama Telefoon ku codee: +44 7786 20 20 04 qor 5 si aad ugu codayso Asisat Oshoala